umshini wokuwomisa we-pellet owomisa ama-pellets ezinhlanzi ezondla izinhlanzi,izinkukhu zokudla ezifuywayo
1.Lo mshini owomile we-pellet usetshenziswa kabanzi kumakhemikhali, ukudla, umuthi, izinto zokwakha, izinto ezisebenza ngogesi kanye nezinye izimboni, isetshenziswa ngokukhethekile ezintweni ezomile ze-granular kanye nama-pellets.
2.umshini wokuwomisa we-feed pellet uvame ukusetshenziswa ndawonye ne-feed pellet embonini yokukhiqiza okuphakelayo.
3.Ama-pellets ezinhlanzi ezinhlanzi athuthelwa kusuka kumphakeli wokudla wezinhlanzi kuya emshinini wokucoca nge-pellet, bese zidluliselwa kubhokisi le-mesh elenziwa ngensimbi engenasici.
Ama-pellets wokugcina kusuka ku- izinhlanzi zokudla eziphuma ngaphandle noma ifulethi lokufa elishubile umswakama ekushiseni okuphezulu, ngakho-ke azikwazi ukuthuthwa futhi zigcinwe ngokushesha futhi zidinga ukuthi zome kuqala. Umshini womshini womshini we-Mesh ibhande ngomshini owenzelwe ngokukhethekile ukususa umswakama we-pellet kanye nokushisa okwenziwa ekukhiqizeni i-pellet. Inqubo yokumisa iPellet: ukubeka lokhu kwibhande lokuhambisa ngesinyathelo esihambisana nakho ngokuxhumana nomoya oshisayo emhubheni ukuze wome. Ukomiswa kwe-pellet engafani, ukumisa okuguqukayo kanye nensiza eyingqayizivele yokuhlukanisa umoya, umshini we-mesh ibhande owomile unikezwa ngamamodeli amathathu wezidingo zakho zokomisa!
umshini wokuwomisa we-feed pellet uvame ukusetshenziswa ndawonye ne-feed pellet embonini yokukhiqiza okuphakelayo. Ama-pellets ezinhlanzi ezinhlanzi athuthelwa kusuka kumphakeli wokudla wezinhlanzi kuya emshinini wokucoca nge-pellet, bese zidluliselwa kubhokisi le-mesh elenziwa ngensimbi engenasici. Ekhuluma ngebhande le-mesh, inesakhiwo esingqimba esiningi futhi siyashukumiseka, okwenza ukomisa kwethu kusheshe kumiswe & ukusebenza kahle, ngakho-ke umshini wokomisa ubizwa nangokuthi Mesh-ibhande Uhlobo lwePellet feed Dryer. Lo mshini owomile we-pellet usetshenziswa kabanzi kumakhemikhali, ukudla, umuthi, izinto zokwakha, izinto ezisebenza ngogesi kanye nezinye izimboni, isetshenziswa ngokukhethekile ezintweni ezomile ze-granular kanye nama-pellets.
Ukusebenza nokunakekelwa Komshini Womshini Wokuphehla we-Pellet
Ikhanda lomshini wokumisa i-pellet lakhiwa ngama-roller amabili aqhutshwa, qinisa, faka inlet nokuphuma.
I-Passive ethwele ingxabano futhi inquma ukuqina kwebhande le-mesh, ngakho-ke izinhlaka zombili zomphetho zombili kufanele zitholwe njalo ngokushisa okuphezulu (ngaphezulu kwama-200 ℃) gcoba uwoyela, ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile kwesomiso se-feed pellet.
I-Tightener ukulungisa ukuqina kwebhande le-mesh. Ukufakwa kokuqala, ibhande le-mesh kufanele liqiniswe, nangemva kokushisa phezulu, iyaqinisa futhi (ngenxa yokwanda kokushisa).
Lesi sigaba indawo yangempela yokusebenza yomiswa kwendawo, kuqhuma ipayipi nepayipi lokukhipha ngaphezulu. Umoya oshisayo ugeleza ungene ngaphansi kwesakhiwo segumbi elingaphakathi uvela ezinhlangothini zombili, bese ikhishwa yi-turbine yomoya evela maphakathi. Kukhona ama-valves okulawula afakwa ku-inlet yomoya kanye nokuphuma ukuze kulungiswe i-air velocity.
Ingxenye yokuhambisa ifakwa ekugcineni kwesomisi sokuphaka izinhlanzi. Ukuqina kwekhandlela lokuhambisa kungalungiswa ngokulungisa isikhundla segesi yegiyavu. Ukudlulisa amagiya ngakolunye uhlangothi lwe-gear kupunguza.
How do Okuphakelayo Pellet Dryer Machine Work?
Lo mshini wokumisa i-pellet webhande wenziwa amayunithi amaningana azimele. Iyunithi ngalinye liqukethe fan yokujikeleza, insimbi yokushisa, uhlelo oluhlukile noma olujwayelekile lomoya olusha lwe-suction ne-immune system. Ipharamitha yokusebenza kwiyunithi ngayinye ilawulwa ngokuzimela, Ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokwenziwe kahle.
I-feeder isabalalisa ama-feed pellets ngokulinganayo kunqimba oluphezulu lwebhande lokuhambisa, elenziwa ngensimbi engenantambo ye-wire mesh noma ipuleti eyenziwe ngefreyimu. Ama-pellets ahamba nesihambisi sebhande bese ewela kancane engxenyeni engezansi. Umoya oshisayo udlula kuma-pellets bese uletha umswakama. Ekugcineni ama-pellets ayakhishwa lapho kuphuma khona izinto.
Idatha yezobuchwepheshe yomshini wokuphakelwa kukaPellet Dryer
Imodeli Mesh ibhande ububanzi
(mm) Amandla aphelele
Ividiyo esebenzayo yomshini wokuomisa we-feed pellet